Shariif Sheikh Axmed, Madaxweynihii waqtiigu dhamaadey, oo sii wada magacaabista degmooyin cusub & xilal dowladeed – idalenews.com
Shariif Sheikh Axmed, Madaxweynihii waqtiigu dhamaadey, oo sii wada magacaabista degmooyin cusub & xilal dowladeed
Waxaa si isdaba jooga ah uga soo baxaayo xarunta Madaxtooyada wareegtooyin uu ku saxiixan yahay Madaxweynihii xilkiisu dhamaadey, Shariif Sheekh Axmed, uu ugu magacaabaayo degmooyin cusub iyo sidoo kale xilal dowladeed oo aan golaha wasiirada soo marin.
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo amaanka qaranka ayaa maanta soo saartay digreetooyin ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya taas oo dagmooyin loogu aqoonsaday deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud.
Digreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynihii Xilkiisu dhamaadey, Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa dagmooyin loogu aqoonsaday deegaanka Docoleey oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana wareegtada lagu yiri in dib loo habeynayo soodimaha ay leedahay dagmada cusub ee la magacaabay.
Sidoo kale waxaa dagmo loo aqoonsaday deegaanka Godinlabe oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale digreetada lagu sheegay in dib loo habeynayo soodimaha ay leedahay dagmadaasi.
Iyadoo wareegtada lagu qeexay in la baabi’iyay wax waliba oo ka hor imaankaro ama aan la socon Karin xeerarkan.
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa waxa ay ugu baaqday hay’adaha dowliga ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhisaan adeegyada ay u baahanyihiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaasi si loo hormariyo.
Wareegtooyin ama Dicreeto isdaba joog ah ayaa ka soo baxaayey Madaxtooyada Shariif Sheekh Axmed, oo uu ku magacaabaayo degmooyin hor leh tan iyo bishii August, 2012 iyo xafiisyo dowladeed oo aan golaha wasiirada soo marin. Lama oga sida ay sharci u noqon karaan magaacaabista xilalkaas iyo degmooyinka uu magacaabey musharaxa xilka madaxweynaha Somalia Shariif Sheikh Axmed. Golaha Wasiirada ayaa ku tilmaamey sharci daro magacaabista madaxweynaha ku howlan yahay xili dalka uu ku jiro doorashooyinka hogaanka sare ee dalka, isla markaasna ku tilmaamey in aan olole siyaasadeed loo isticmaalin magacaabista degmooyin cusub iyo xilal dowladeed.
8 Musharax ayey Guddiga Doorashada Madaxweynuhu sheegeen in ay buuxiyeen sharuudihii laga rabey
Fashil ku yimid heshiiska daabacada shilin Soomaaliga ee Waqooyiga Suudan iyo Soomaaliya wada gaareen